MUUQAAL: Unai Emery Oo Si Buuxda U Sharaxay Sababta Dhabta Ahayd Ee Uu Kabtan Uga Dhigtay Aubameyang. - Gool24.Net
MUUQAAL: Unai Emery Oo Si Buuxda U Sharaxay Sababta Dhabta Ahayd Ee Uu Kabtan Uga Dhigtay Aubameyang.
November 11, 2019 Mahamoud Batalaale
Xaalada Arsenal ayaan gabi ahaanba ahayn sidii ay jamaahiirta kooxdoodu doonayeen waxaana xili ciyaareedkan soo jiray waxyaabo muran badan dhaliyay oo uu Unai Emery sal u ahaa.
Min shaqo ka joojintii Mesut Ozil, kabtan ka dhigashadii Granit Xhaka ilaa murankii xilka looga qaaday Xhaka iyo waliba natiijo xumada Gunners waxay ka mid ahaayeen dhacdooyin taxane ahaa oo Emirates Stadium gilgilay.
Laakiin waxaay su’aal laga keenay qaabkii uu markale Unai Emery kabtan uga dhigtay Aubameyang balse waxa uu sida aad muuqaalka hoose ku daawan karto sharaxay sababtii uu xidiga reer Gabon kabtanka ugu magacaabay.
Shuruudaha uu Unai Emery kabtanimada Aubameyang ku saleeyay ayayna qaar ka mid ahi u muuqan kuwo ay tahay in kabtanka koox wayn lagu saleeyo isaga oo aan xataa sheegin shuruudaha ugu muhiimsan ee kabtan lagu doorto.
Marka lag reebo in Aubameyang uu yahay ciyaartoy khibrad leh oo ixtiraam ka haysta oo uu Emery tilmaamay in uu ku doortay, dhamaan shuruudaha kale waa kuwo aan sal ku lahayn doorashada kabtanimo.
Inta ugu badan waxaa kabtanka koox lagu soo xushaa in uu leeyhay door hogaamin waana shuruuda ugu muhiimsan ee ay ahayd in Emery uu doorashadiisa ku saleeyo laakiin waxaa lama filaan ah in aanu xataa hadalkiisa ku soo darin in uu arintan ku doortay xidiga reer Gabon.
Unai Emery oo sharaxaya sababtii uu kabtanimada Aubameyang ku soo xushay kadib khilaafkii uu xilka kaga qaaday Xhaka ayaa yidhi: “Doorashada kowaad waa Aubameyang sababtoo ah khibrad ayuu leeyahay wuxuuna haystaa ixtiraamka qolka labiska”.
Laakiin Emery oo shuruud aan kabtanimada lagu xulay ku salaynaya go’aankii uu Aubameyang ku magacaabay ayaa yidhi: “Sanadkii hore waxa uu isagu ahaa gool dhaliyaha ugu sareeyay Premier League”.
Emery oo qiraya in Aubameyang uu waqti u baahan yahay in uu masuuliyada kabtanimada kula qabsado ayaa yidhi: “Sidoo kale waxaan ogahay in isagu uu u baahan yahay waqti si uu boqolkiiba boqol ugu qaato masuuliyadaas”.
“Waxaanu doonaynaa in aanu isaga taageerno. Ciyaartoy kasta oo qolka labiska joogaa waxa uu taageeri doonaa afarta kabtan. Anagu waxaanu doonaynaa in aanu isaga ku taageerno ka kabtanka kowaad ahaan” ayuu Emery hadalkiisa raaciyay.
Emery oo Aubameyang ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Sababtoo ah isagu hal talaabo ayuu ku horeeyaa in uu taas qaato si uu u gaadho ama uu masuuliyadaas qaato”.
Halkan ka daawo muuqaalka Unai Emery oo si buuxda u sharaxaya sababtii uu Aubameyang kabtanka kowaad uga dhigtay.
Arsenal boss Unai Emery explains why he gave the captaincy to Pierre-Emerick Aubameyang pic.twitter.com/yrE94PF57M
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 11, 2019
Inkasta oo ayna Arsenal soo guulaysan dhamaan kulamadii tartamada oo dhan ugu danbeeyay ee waqtiyadii la soo dhaafay, haddana Unai Emery ayaan u arkin in ay shaqadiisu halis wayn ku jirto.
Unai Emery ayaa shuruudaha ugu waa wayn ee uu Aubameyang ku doortay ku tilmaamay in uu yahay ciyaartoy khibrad leh, gool dhaliyihii ugu sareeyay ee Premier League uu yahay isla markaana uu ixtiraamka kooxdiisa haysto laakiin in uu door hogaamin leeyahay ayuuna ka hadlin taas oo ah arinta ugu muhiimsan ee kabtan looga baahan yahay.